Kaalay, Sayid Ciise, Kaniisadda Caalamka ee God Switzerland (WKG)
Nolosha adduunyadu waxay ina buuxineysaa walaac weyn. Dhibaatooyin ayaa jira meel kasta, ha ahaadaan daroogada, socdaalka dadka qalaad ama khilaaf siyaasadeed aawadood. Waxa kale oo jira faqri, cudurro aan laga bogsan karin iyo diirimaadka adduunka. Waxaa jira sawirro carruureed, ka ganacsiga dadka iyo rabshado aan sabab lahayn. Kororka hubka nukliyeerka, dagaalladii iyo weeraradii argaggixisada ayaa walwal badan leh. Ma muuqato wax xal u ah tan mooyaane haddii Ciise dhaqso u soo laabto. La yaab ma laha, markaa, in Masiixiyiintu muddo dheer u duceeyaan oo u duceeyaan imaatinka labaad ee Ciise: "Kaalay, Ciise, Kaalay!"
Masiixiyiintu waxay ku kalsoon yihiin soo laabashada ballanqaadka Ciise waxayna filayaan in wax sii sheegidda la fulin doono. Fasiraadda waxsii sheegyada Baybalka ayaa isu rogaya inay tahay arrin aad u adag maxaa yeelay waxay ku dhammaystireen qaab aan laga fileyn. Xataa nebiyadii ma ay aqoon. Tusaale ahaan, iyagu wax fikir ah kama haysanin sida Masiixu ku dhalan doono ilmo ahaan iyo inuu ahaan doono bini-aadam iyo Eebbe (1 Butros 1,10: 12). Sidee ayuu Ciise oo ah Rabbigeenna ah Badbaadiyeheenna ugu silcin lahaa una dhiman doonaa dembiyadeenna oo uusan weli Ilaah u noqon? Kaliya markay run ahaantii dhacday waad fahmi kartay. Laakiin xitaa markaa wadaaddada aqoonta leh, culimmada iyo Farrisiintu ma ay garan. Halkii ay Ciise ku aqbalaan gacmo furan, waxay raadinayaan inay dilaan.
Waxay noqon kartaa wax lagu farxo in la maleeyo sida waxsii sheegyada u rumoobi doonaan mustaqbalka. Laakiin dhex gelinta badbaadadeenna ee fasirradan ma aha xigmad ama xikmad, gaar ahaan marka loo eego xilliyada dhammaadka. Sannadba sannadka ka dambeeya, nebiyadii is-wacdiyayaa waxay saadaalinayaan taariikh cayiman oo soo laabashada Masiixa, laakiin ilaa hadda iyagu dhammaantood way khaldeen. Waa maxay sababtu? Sababtoo ah Baybalku had iyo jeer wuxuu noo sheegay inaanan garan karin waqtiga, saacadda, ama maalinta waxyaalahan (Falimaha Rasuullada 1,7: 24,36; Matayos 13,32; Mk.). Mid ka mid ah maqalka Masiixiyiinta: «Xaaladda adduunka ayaa ka sii daraysa! Xaqiiqdi waxaan ku nool nahay maalmihii la soo dhaafay ». Fikradahan waxay Masiixiyiintu la jireen qarniyo qarniyo. Dhammaantood waxay dareemayeen inay ku noolyihiin maalmihii la soo dhaafay - iyo wax lala yaabo, waxay ahaayeen kuwo sax ah. "Maalmihii ugu dambeeyay" wuxuu ka dhashay dhalashadii Ciise. Taasi waa sababta ay Masiixiyiintu ugu noolaayeen xilliyadii ugu dambeeyay ilaa markii ugu horreysay uu Ciise yimid. Markuu Bawlos ku yidhi Timoteyos "waqtiyo xun ayaa iman doona maalmihii ugu dambeeyay" (2 Timoteyos 3,1), kama uusan hadlin waqti gaar ah ama maalin mustaqbalka. Paul wuxuu intaas ku daray in dadku aad u jeclaan lahaayeen maalmahan la soo dhaafay oo ay noqon doonaan hunguri, naxariisdarro, aflagaaddo, mahad-celin, dulqaad, iyo wixii la mid ah. Markaas ayuu ka digay: «Ka fogow dadka noocaas ah» (2 Timoteyos 3,2: 5). Waxa iska cad inay jiri jireen dad sidan oo kale ah wakhtigaas. Maxaa kale Bawlos u bari lahaa kaniisadda inay ka fogaato iyaga? Sida ku xusan Matayos 24,6: 7, waxaa naloo sheegay in quruumuhu isu soo taagi doonaan midba midka kale isla markaana ay jiri doonaan dagaallo badan. Tani wax cusub ma aha. Goorma ayey jireen wakhtiyo aan dagaal adduunyada ka jirin? Waqtiyadu had iyo jeer way xumaan jireen wayna ka sii darayaan, kamana fiicna. Waxaan la yaabanahay sida ay u xun tahay inay ahaato kahor inta uusan Masiixu soo noqon. Ma aqaan.
Bawlos wuxuu qoray: "Laakiin dadka xun iyo khayaanada, inta sii xumaanaysa" (2 Timoteyos 3,13). In kasto oo ay xumaato, Bawlos wuxuu sii wadaa: "Laakiin la joog wixii aad baratay iyo wixii laguugu aaminay" (2 Timoteyos 3,14).
Si kale haddii loo dhigo, si kasta oo ay u xumaato, waa inaan sii wadnaa rumaynta Masiixa. Waa inaan sameynaa wixii aan ka baranay iyo wixii aan ka baranay Qorniinka iyada oo loo marayo Ruuxa Quduuska ah. Marka laga hadlayo waxsii sheegyada Baybalka, Ilaah had iyo goor wuxuu dadka u sheegaa inayan baqin. "Ha ka baqin!" (Daanyeel 10,12.19). Waxyaalo shar ah ayaa dhici doona, laakiin Ilaah wax kasta wuu xukumaa. Ciise wuxuu yiri: “Waan idinla hadlay adiga inaad nabad igu dhex jirtaan. Aduunka waad ka baqaysaa; laakiin kalsooni ku qabo, waan ka adkaaday dunida » (Yooxanaa 16,33).
Waxaa jira laba siyaabood oo loogu fiirsado ereyada "Kaalay, Ciise, kaalay". Mid wuxuu sheegaa damaca soo laabashada Masiixa. Ta labaad, tukashadeenna, codsiyada, ee kitaabka Muujintii "Aamiin, haa, kaalay, Rabbi Ciise!" (Muujintii 22,20).
Qalbigeyga adigaan kugu aaminay oo aqalkayga ayaan kaxaystay. Iga caawi inaan si fiican kuu garto. Ii dhiib nabadaada adduunyada jahwareersan ».
Aynu qaadanno wakhti dheeri ah si aan ula noolaano xiriir qofeed oo lala yeesho Masiixa! Markaa maaha inaan ka walwalo dhamaadka adduunka.